Maxay tahay lixda arrimood oo lagu xasuusan doono Sanadka 1-aad oo ay jirsatay Dowladda Farmaajo? | Maxay tahay lixda arrimood oo lagu xasuusan doono Sanadka 1-aad oo ay jirsatay Dowladda Farmaajo? | Hal Sheegaha La Hubo
Maxay tahay lixda arrimood oo lagu xasuusan doono Sanadka 1-aad oo ay jirsatay Dowladda Farmaajo?
Waxaa inta badan goobaha lagu shaaho ee ku yaalla magaalada Muqdisho iyo Gobolada dalka laga hadal hayaa caqabada Siyaasadeed ee lasoo daresay Dowladda Soomaaliya tan iyo markii 8-dii bishii February ee 2017,ka ee la doortay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llahi Farmaajo.
Dowladda Somalia ee uu Hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo ee sana jirsatay ayaa caqabadaha ugu badan kala kulantay fal celin ka dhalatay talaabooyinka ay qaaday.
Dowladda qudheeda waxa ay qaaday talaabooyin cirka ku shareeray caqabadaha jiray kuwaa oo u muuqday inay ku degdegtay iyadoo aan caga dhigan.
Caqabadaha qaar ayey dadku saadaalinayeen in Soomaaliya ay dib ugu laaban karto halkii ay labaatan iyo dhowr sano ka hor taagneyd Soomaaliya.
Xasuusaha waaweyn ee shacabku dib u milicsankaraan ayaa waxaa ka mid ah:
1-Go’aanka ay Dowlada Soomaaliya ka gaartay xiisada ka dhextaagneyd dowladaha Khaliijka ee lagu caburinaayay Qadar.
3-Khilaafyo hareereeyay Dowladda iyo maamul Goboleedyada sida HirShabelle iyo Galmudug oo gaaray heerkii ugu adkaa.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa goortii la doortay sheegay in dowladiisa ay xooga saari doonto Siyaasadda iyo Amniga gudaha, hase ahaatee waxaa muuqaneysa inay ku dhex jiraan shaqsiyaad danqinaaya boogaha Siyaasadeed ee bogsiinada u baahan.
Si kastaba ha ahaatee, Dowladda Soomaaliya ee sanadka jirsatay ayaa looga fadhiyaa in sanadaha u harsan ay marba marka xigta dib u saxdo khaladaadka ka dhaca.